မြန်မာ့တပ်မတော်ကို ပုံရိပ်ကောင်းစေချင်တဲ့ တပ်ထဲက တပ်မတော်သားတွေအတွက် ဆရာဒေါက်တာဇော်ဝေစိုးမှ ရေးသားပေးပို့တဲ့ Message သုံးချက် – Shwe Thadin
ဆရာ့အနေနဲ့ ဒီမှာ ပေးချင်တဲ့ Message က ဘာလဲဆိုတော့ ဒါကြောင့် ဒါနဲ့ ပတ်သက်နေတဲ့ လူတွေ အကုန်လုံး တွေးကြည့် စဉ်းစားကြည့်လို့ ဆရာ ပြောချင်တယ်။ အထူးသဖြင့် ဒီလိုမျိုး အုပ်စု တဖွဲ့….. စဉ်းစားကြည့်ပေါ့……! အသက် ၆၅-နှစ်ရှိပြီး ပင်စင် မယူချင်သေးတဲ့သူ….! တကယ်တမ်းတော့ ၆၀ ကျော်ရင် ပင်စင်ယူရမှာလေ။ နောက်ပြီးကျတော့ သူ့အောက်ကလူတွေ အဲလောက်တောင် ညံ့နေလို့လား…..? ဆရာတို့တွေမှာ ဆရာဆိုရင် အရိုးနဲ့ ပတ်သက်ရင် တော်တော် ကျွမ်းကျင်ပါတယ်။ ဆရာ ခွဲတာ စိတ်တာတွေ ကျွမ်းကျင်တယ်နော်။
ဒီလိုမျိုး အဆစ်တွေကို အစားထိုးတာ၊ ခါးရိုးခွဲတာ၊ ဆရာ လည်ပင်းရိုးတွေ ခွဲတာ ကျွမ်းကျင်တယ်။ ဒါပေမယ့် ဆရာ့ထက် တော်တဲ့ တပည့်တွေကိုပဲ ဆရာ မွေးတယ်…… မွေးနိုင်အောင်လည်း လုပ်တယ်။ နောက်ပြီးတော့ ဆရာဟာ တော်လွန်းလို့ ဆိုပြီးတော့ ဆက်နေစရာအကြောင်းလည်း မရှိဘူး။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ မရှိရင် မဖြစ်တဲ့ လူလို့ မရှိဘူး။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ သူမရှိရင်တော့ဒီစစ်တပ်ကြီးပျက်သွားမှာပဲ ဆိုတဲ့လူ တခါမှ မပေါ်ဖူးဘူး။
နောက်လည်း ပေါ်မှာ မဟုတ်ဘူး။ အဲဒါ ဘာဖြစ်လို့ ဖြစ်ချင်ရတာလဲ ဆိုတာ စဉ်းစားကြည့်လိုက်။ စဉ်းစားကြည့်လိုက်ရင် ဒါရှင်းတယ်။ အာဏာရူးခြင်းပဲ။ အာဏာကို မက်မောခြင်းပဲ။ စည်းစိမ်တွေ၊ အာဏာတွေ၊ ငွေကြေးတွေ။ အဲဒီလောဘတွေ ရှိနေတဲ့ လူတွေ။ အဲဒီလို လူတွေ ရှိနေသ၍ ဒီလိုမျိုး မတရားမှုတွေနဲ့ အကြမ်းဖက်မှုတွေက ဖြစ်နေမယ်။ ဒါကြောင့်မို့ အဲဒီလိုမျိုး အာဏာရူးနေတဲ့ အကြမ်း ဖက်မှုတွေနဲ့ လောဘတွေ ရှိနေတဲ့လူကို ဒီလိုမျိုး တပ်မတော်ထဲမှာ ရှိနေစေခြင်းသည် အဲဒီလိုလူများ ရှိနေခြင်းသည် တပ်မတော်ရဲ့ ပုံရိပ်ပျက်ခြင်းပဲ။ အခုဟာက ပုံရိပ်ပျက်ရုံတင်မကဘူး။
တပ်မတော်က အဖတ်ဆယ်လို့ မရဘူး။ အဲဒီလိုမျိုး ဖြစ်နေတာကို ဒီတပ်မတော်ထဲမှာ ရှိနေတဲ့ လူတွေ လက်ခံနေသလား..? ဒီလိုမျိုး အဓိပ္ပါယ်မရှိ အာဏာရူးနေတဲ့ လိုချင်နေတဲ့ တပ်မက်နေတဲ့ အခုလိုမျိုး အဆမတန် စဉ်းစားကြည့် ….. ဒီတပ်ထဲမှာ ရှိနေတဲ့ Majority ထက် အဆပေါင်းများစွာ မြန်မာနိုင်ငံမှာရော အတူတူပဲ ချမ်းသာနေတာ ဘာမှ အဓိပ္ပါယ်မရှိဘူး။
စဉ်းစားကြည့် ဒီငွေကြေးတွေက ဘာမှ အဓိပ္ပါယ်ရှိတာမဟုတ်ဘူး။ အဲဒီလိုမျိုး ချမ်းသာနေတဲ့ လူတွေက အုပ်ချုပ်နေတဲ့ စစ်တပ် ကမ္ဘာပေါ်မှာ ဒီလိုဟာမျိုးက မရှိသင့်တော့ဘူး…! အဲဒီလိုမျိုး လူတွေသာ ရှိနေပြီး အဲဒီလိုမျိုး စစ်တပ်တွေနဲ့သာဆိုရင် ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ ဒီ လက်နက် ကိုင် အဖွဲ့အစည်းတွေက ကောင်းနိုင်တော့မှာလဲ..! ဒါကြောင့် ဆရာ့အနေနဲ့ ဒီ Message တခုကို ထပ်ပေးချင်တယ်။ အဲဒီ စာရေးဖို့လဲ လုပ်နေတယ်။ ဒီ မြန်မာ့ရဲ့ တပ်ထဲက တကယ် မြန်မာ့တပ်မတော်ကို မြန်မာ့ စစ်တပ်ကို ကောင်းစေချင်တဲ့ သူတွေ၊ မြန်မာ့ စစ်တပ်ကို အဓိပ္ပါယ်ရှိစေချင်တဲ့သူတွေ၊ မြန်မာ့စစ်တပ်ကို ပုံရိပ်ကောင်းစေချင်တဲ့သူတွေ၊
ကမ္ဘာမှာ မြန်မာ့စစ်တပ်လို့၊ မြန်မာ့တပ်မတော်လို့ လက်မထောင်ချင်တဲ့ သူတွေဟာ ဒီအချိန်မှာ မင်းအောင်လှိုင်အောက်မှာ နေစရာ အကြောင်းကို မရှိဘူး…… အဲဒီလို လူမျိုးတွေ နောက်လည်း ဘယ်တော့မှ မပေါ်အောင် မြန်မာ့တပ်မတော်က စစ်တပ်က ပြုလုပ်သင့်တယ်လို့ ဆရာကတော့ ဒီနေရာမှာ အဲဒီ Message ကို ပေးချင်တယ်…. ဆရာ အဲဒါကို ရေးဖို့လည်း လုပ်နေတယ်။ ဆက်ပြီးလည်း တောက်လျှောက်လည်း ဒီကိစ္စ ပြောသွားမယ်။ အဲတော့ နံပါတ် (၁) က ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရော၊ ဆရာထင်တယ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရော ၂၀၀၈ ကို လက်ခံခဲ့တာ။ ဒီသံယောဇဉ်တွေနဲ့ ၂၀၀၈ ကို လက်ခံခဲ့တာ။
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလည်း ထောင်ခဲ့တာ ပြည်သူ့ရဲ့တပ်ကို ဒီလိုထောင်ခဲ့တာ။ အဲဒါတွေနဲ့ လွဲပြီးတော့ လွဲနေတဲ့ တပ်မတော်ကို ဆရာတို့ ထားစရာအကြောင်းမရှိဘူး…! ဒါကြောင့် အဲဒီ ပျက်နေတဲ့ ပုံရိပ်တွေကို ပြန်ကောင်းအောင်လုပ်ဖို့လည်း အဲဒီ တပ်မတော်မှာပဲ တာဝန်ရှိတယ်…! အထဲက လူတွေမှာ တာဝန်ရှိတယ်လို့ ပြောချင်တယ်။ ဒါကြောင့် ဆရာ အဲဒါကို ဒါ့အပြင် ဆရာတို့လည်း မြန်မာနိုင်ငံ ကိုယ့်ရဲ့တပ်ကို ဆရာတို့ ကောင်းစေချင်တယ်။ ကိုယ့်ရဲ့တပ်ကို ကိုယ် ကမ္ဘာပေါ်မှာ ဒီလိုမျိုး ပြည်သူအပေါ် သစ္စာရှိတဲ့၊ နော် လူသားဆန်တဲ့၊ တကယ့် Geneva Convention နဲ့ ညီတဲ့ တပ်မတော် ဖြစ်ချင်တယ်။ ဖြစ်စေချင်တာ။
အဲလိုဖြစ်ဖို့အတွက် ဒီနေ့ ပျက်နေတဲ့ ပုံရိပ်ကို ပြန်ပြင်ပြီး ကောင်းအောင်ရေးရမယ့်သူဟာ ဒီလူတွေပဲ။ အဲဒီ တပ်ထဲကလူတွေ…. ဆရာတို့ ရေးပေးလို့မရဘူး….. အဲဒါကို သူတို့အနေနဲ့ ပြန်ပြင်ပြီးရေးဖို့ အချိန်တန်ပြီလို့ ဆရာကတော့ ပြင်းပြင်းထန်ထန်သတိပေးချင်တယ်။ အသိလည်း ပေးချင်တယ်။
အဲဒါ နံပါတ် ၁။ နံပါတ် ၂ က ဆရာ သွေးထွက်သံယို မဖြစ်ချင်ဘူး။ သွေးထွက်သံယို မဖြစ်ဖို့ စဉ်းစားကြည့်ရင် တဘက်က/မှန်တဲ့ဘက်က ဘယ်လိုလုပ်ပြီး မှားတဲ့ဘက်ကို စဉ်းစားကြည့်……? ရွှေ့လို့ရပါမလဲ။ ပြည်သူဘက်က အမှန်ပဲ။ မတရားမှုကို တွေ့နေတာ…. အဲတော့ တရားတဲ့ဘက်က မှန်တဲ့ဘက်က ပြင်လို့မှ မရတာ။
ပြင်ရမယ့် ကိစ္စမဟုတ်ဘူး။ မတရားတဲ့ဘက်က မှားတဲ့ဘက်က ပြင်ရမှာ…! ဒါမှသာလျှင် ဒါက တကယ် အဓိပ္ပါယ်ရှိတဲ့၊ လွတ်လပ်တဲ့၊ မျှတတဲ့ တကယ် နောင် ရေရှည်တည့်တံ့ခိုင်မြဲမယ့် တိုင်းပြည်ဖြစ်မှာ။ အဲလို တိုင်းပြည်ဖြစ်ဖို့အတွက် အမှားလုပ်နေတဲ့သူတွေ၊ မတရားလုပ်နေတဲ့သူတွေသာလျှင် ပြင်သင့်တယ်။ လျှော့သင့်တယ်။
ဒါကြောင့်ဆရာ အဲဒါကို ဒုတိယ Message အနေနဲ့ တပ်ထဲကလူတွေကို ပေးချင်တာက အမှန်တရားဘက်ကိုလာ…….! တရားတဲ့ဘက်ကိုရွှေ့ ၊ ဒီနည်းအားဖြင့် နောင် ဖြစ်လာတော့မယ့် သွေးထွက်သံယိုကို တားလို့ရမယ်လို့ ဆရာမြင်တယ်။ ဒါကြောင့် ဒါ ဒုတိယ message အနေနဲ့ ပေးချင်တဲ့ message ပဲ။
ဒါကြောင့်မို့ တရားတဲ့ဘက်ကို မှန်တဲ့ဘက်ကို ပြောင်းပါ၊ ရွှေ့ပါ။ တပ်ကို ကိုယ့်ရဲ့ ဂုဏ်တွေ သိက္ခာတွေ၊ ဒီ Image တွေကို ထိန်းပါလို့ ဆရာက ပြောချင်တယ်။ အဲဒါက ဒုတိယအချက်။ တတိယအချက်အနေနဲ့ကတော့ တကယ်တမ်း တို့ မြန်မာပြည် စစ်ဖြစ်နေတဲ့ ဒီပြည်တွင်းစစ် နှစ် ၆၀၊ ရ၀ ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ အခြေခံအကြောင်းရင်းက ဖယ်ဒရယ်ကို သွားဖို့၊ Federal Army ရှိမှ ဖြစ်မှာ၊ မြန်မာပြည်မှာ Federal Army ကို ဘယ်လို ပုံစံနဲ့ တည်ထောင်မလဲဆိုတာ လုပ်မှရမယ်။ ဒီလိုမှ မလုပ်ရင် ဘယ်တော့မှ ဒီကိစ္စဟာ ပြီးမှာ မဟုတ်ဘူး။
အခုလိုမျိုး တဦးတယောက်က အာဏာကို ဆုပ်ကိုင်ထားတဲ့ စစ်တပ်မျိုးနဲ့ မြန်မာပြည်ဟာ ရှေ့လျှောက်သွားလို့မရဘူး….? သွားလို့လည်း မရဘူး….? ဟိုတုန်းကလည်း သွားလို့မရဘူး….? ဘယ်တုန်းကမှ သွားလို့မရဘူး။ သွားခဲ့ပြီးပြီ၊ နှစ်ပေါင်း ၆၀၊ ရ၀ သွားခဲ့ပြီးပြီ။ ဒီဟာကြောင့် ဖြစ်နေတာ။ Root cause ဘာလဲဆိုတာ သိပြီ၊ အဲဒါကြောင့် အဲဒီ Root cause ကို ဖြေရှင်းတဲ့ အခါမှာ အားလုံး မြန်မာတွေရော၊ မြန်မာနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ ပြည်တွင်းပြည်ပ အားလုံးကရော…. အထူးသဖြင့် မြန်မာ့တပ်မတော်ထဲက လူတွေကရော ဖြေရှင်းသင့်တယ်။
ဖြေရှင်းမှ ပြေလည်မယ့် ကိစ္စ။ ဒါကြောင့် အဲဒီ Third Message က Federal လိုဟာမျိုး၊ Federalism လိုမျိုး၊ Federal Union လိုမျိုးတပ်မတော်အဖြစ် ပုံစံပြောင်းဖို့အတွက် အခုရှိနေတဲ့ တပ်ထဲကလူတွေမှာ တာဝန်ရှိတယ်လို့ ဆရာကတော့ ပြောချင်တယ်။
သူ့ရဲ့ဇာတိမြေလေးကိုပြန်သွားပြီး မိခင်ဖြစ်သူနဲ့အတူဈေးရောင်းရန်ဆိုင်ခန်းလေးဆောက်လုပ်နေတဲ့ အဆိုတော် ညီမင်းခိုင်